एकोफोबिया वा उचाइहरूको डर - राम्रो र खराब
Acrophobia - कसरि हाइट्स देखि डराउन रोक्न?
एक जुनसुकै अवस्था जसमा एक व्यक्तिले ऊँचाइको डरको अनुभव अनुभव गर्दछ भने ए्रोफोबिया भनिन्छ। मनोविज्ञान को दृष्टिकोण देखि, यसमा एक सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छ। पहिलो पक्षमा पक्षले आफूलाई आत्म-संरक्षणको प्रकोपलाई बलियो बनाउँछ, दोस्रो - आतंकवादी आक्रमणको डरबाट डरको विकास, जब डट कमको एक विचार डरलाग्दो छ।
एकोफोबिया के हो?
असुरक्षित र अस्थिर समर्थनमा रहेको डरलाग्दो डर, जसको मुनि एक हावाको पाठा छ, सबै मानिसहरू मा निहित छ। शरीरमा सुरक्षात्मक तवरमा सामेल छन् - उनीहरूले सम्भावित पतन र दुखाइको मृत्युको प्रतिरोध गर्दछ। एक्रो्रोफोबिया उच्च साइटहरु, छतहरु, balconies, पर्वत चोटहरु र पहाड मा अन्य स्थानहरु जहां सतह अस्थिर छ को एक घुसपैठ, लगातार डर हो।
एक व्यक्तिले सन्तुलन गुमाउनदेखि डराउने एक प्लेटफर्म, जनावरको डरको कारण हुन्छ। यो जुनसुकै अवस्थाको साथ "फान्टोफोबिया" नजिकको जस्तो देखिन्छ - अपरिहार्य गालीको डर, गहिरो गहिरो छ। यो अनुभूति स्कूबा विविधता, पर्वतारोहीहरू, फायरम्यानहरू - उच्च-उचाई, आपातकालीन स्थितिको कर्मचारीका कर्मचारीहरू देखिन सक्छन्। यसले मान्छेसँग सामना गर्न महिना र वर्ष लाग्छ।
एक्रो्रोफोबिया - लक्षणहरू
एक व्यक्ति आफ्नो कमजोरीहरू थाह छ र उनीहरु आफ्नो डर संग एक्लै रहन अवस्थाबाट जोगिन प्रयास गर्दछ, तर यदि यो हुन्छ - पीडा ईर्ष्या हुनेछैन। गम्भीर तनावको अवस्थामा, उहाँले एक शारीरिक प्रतिक्रिया विकास गर्दछ: एड्रेनालेन र नेरेपिनफाइनिनरीको रिलीजले हृदयलाई उन्माद तालमा हराउँछ, हातहरू छोटो छोटो हुँदै हिँडिरहेका हुन्छन्, र खुट्टाहरू "कडा" हुन्छन्।
शरीर चिसो पसिनाले ढाकेको हुन्छ, आज्ञा पालन गर्न बन्द हुन्छ, मांसपेशी स्पाजमहरूको कारण "काठ" हुन्छ।
अनुहार को छाला एक मृत्यु को पीला छाया को अधिग्रहण गर्दछ।
हराउने ब्यालेन्सको डरले अन्तरिक्षमा समन्वयको वास्तविक अवरोधको सामना गर्दछ: उचाईको डर बढ्यो, चक्कु।
सबै चारौं मा बनने को इच्छा छ - समर्थन को धेरै बिंदुहरु सुरक्षा को भावना बनाइन्छ। जब तपाईं फेरि हेर्न प्रयास गर्नुहुन्छ, ए्रोफोबिया पल्ट बारम्बार गुणा गर्दछ - दाँया पूर्व-विजिट अवस्था सम्म। स्वास्थ्य ए्रोफोबिया को लागि गंभीर खतरा प्रतिनिधित्व गर्दैन, तर यसको अभिव्यक्तिले रोगीलाई सोच्न सक्छ कि उनी कार्डिक गिरफ्तारीबाट मृत्युको नजिक हुनुहुन्छ।
किन मान्छे हाइट्सबाट डराउँछ?
मान्छे अतीत, मानसिक बीमारी, शारीरिक थकानमा अप्रिय अनुभवको कारणले गर्दा ठूलो डर अनुभव गर्दैछ। यसले उत्प्रेरित गर्न सक्छ: असफल पतन, रीढ़ रोगहरू, हार्मोनल विफलता , दिमाग रोग। चरित्रको गुण: संदिग्धता, अत्यधिक भावनात्मकता - हाइट्सको डर बढाउनुहोस्, फोबिया भ्रामक हुन्छ।
आदर्श जीवनको खतरा अन्तर्गत स्व-संरक्षणको प्रकोपको प्रयोग हो। यदि यो थिएन भने, मानिसहरूको मृत्युको प्रतिशत धेरै चोटि बढ्नेछ। डरलाग्दो व्यक्ति, तर मजाक परिस्थितिमा डर हटाउन तयार छ - एरिफोबियाले पीडा गर्दैन। उहाँले आफ्नो ढाँचा गुमाउनु भएको छैन, स्पष्ट छ भनेर के स्पष्ट पार्छ, छिटो र सही निर्णय गर्दछ।
हाइट्सको डर राम्रो र खराब छ
यो लामो समयदेखि उल्लेख गरिएको छ कि मान्छे जो ऊँचीदेखि डराउँदैनन् भने नाजुक परिस्थितिहरूमा निरन्तरता पाउँछन् र प्रायः तिनीहरू आफैले सिर्जना गर्छन्। यी तस्वीरहरू र तिनीहरूको भावनाहरू दृढतापूर्वक मेमोरीमा उत्प्रेरित हुन्छन्, उनीहरूको क्षमतामा भरोसा सिर्जना गर्छन् । विचारमा अन्य व्यक्तिहरू, हाइट्स कसरी डराउनु हुँदैन, कम्पासमा गहिरो खोल्नुहोस् र आफैंबाट अपमानजनक भिजुअल चित्रहरू टाढा जान चाहन्छन्।
हाइट्सको डरको प्रयोग
जब ए्रोफोबिया एक ठूलो मात्रा मा एड्रेनालाईन जारी गरेको छ - यो हार्मोन एड्रेनाल ग्रंथहरु द्वारा उत्पादित गरिन्छ। यसले सबै महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरूको सक्रियता उत्पन्न गर्दछ। जीवनको लागि संघर्षको लागि जीव सम्भव लडाइको लागि तयारी गर्दैछ। रक्त आपूर्ति बढ्छ, हृदयले रगत 2-3 चोटि धक्का धक्का दिन्छ। एक व्यक्तिले बलियो वृद्धिको महसुस गर्छ - यसले आफैलाई विश्वास गर्न मद्दत गर्छ र ऊनहरू भन्दा डराउँदैन।
समय "फैलाउँछ" - डेयरभिलले सटीक, छिटो आलोचना र भावनालाई बनाउँछ जुन एक घण्टा लाग्यो, तथापि वास्तवमा यो सेकेन्ड थियो।
जीवनको यस्तो क्षणमा, मान्छे जीवनको विश्लेषण गर्न सक्षम छन्। त्यहाँ मानहरूको पुनरावृत्ति हो जुन भविष्यमा हुनेछ को लागी राम्रो लागी चरित्र र कार्यहरू।
एरिफोफोबियाको विजयले आत्म-सम्मानको भावना बनाउँछ।
एक व्यक्तिलाई थाहा छ - उसले छेउमा गलत कदम चाल्नुपर्छ, र जीवन समाप्त हुनेछ, त्यसैले उसले प्रत्येक दोस्रो को सराहना गर्न सिक्छ। TV को सामने सोफे मा आलस्य र व्यय समय मा इन्डलग गर्ने उनको लागि अब छैन। तर स्काइडाइविंग, पर्वत चोटहरू पराजित गर्दै, उच्च स्प्रिंगबोर्डबाट उड्ने, लामो दूरीसम्म उहाँका लागि आकर्षक हुनुभयो।
हाइट्सको डरको हानि
Acrophobia को "पदक" को उल्टो पक्ष छ। संवेदनशील तंत्रिका तवरले व्यक्तिहरू आत्म-आलोचना गर्छन् र उनीहरूको आफ्नै क्षमतालाई कम पार्छन्। यदि तिनीहरू एक कमजोरी परिसरबाट पीडित छन् भने, उनीहरूले पूरै त्रासमा सानो समस्या झल्काउँछ। यस पृष्ठभूमिको विरुद्धमा, आत्म-नियमन प्रणाली खराब छ, र यसले शारीरिक स्तरमा आफैंको स्वरूपमा प्रकट गर्दछ:
हृदय प्रणाली को तीव्र पहना;
निरन्तर विचारहरू कि उचाइहरूको डर राम्रो छैन;
केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को कमी र, परिणाम को रूप मा, समय देखि पहिले मृत्यु (एकोफोबिया "ले 20 वर्ष को जीवन सम्म गर्न सक्छन्")।
हाइट्सको डरले कसरी रोक्न सक्छ?
एक्र्रोफोबियालाई पराजित गर्न, मनोवैज्ञानिकहरुलाई एक विजेता पार्टी संग सम्भावित स्थिति को प्रतिनिधित्व गर्न को लागी सल्लाह दिइएको छ र प्राप्त सफलताहरु (एक पैराचुट या एक "tarzanka" संग, पानी मा टवर देखि गोता) संग। आफैलाई निरन्तर कामको साथ, उचाइको डरले यसको स्तर गुमाउँछ जब सम्म यो पूर्णतया गायब हुन्छ। तपाईं निम्न चरणहरूबाट एक्र्रोबिया हटाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ:
निम्न अक्षांशको प्लेटफार्म छान्नुहोस् र नियमित रूपमा यसलाई भ्रमण गर्नुहोस् जब सम्म तपाईंसँग विश्वास र सतहमा ठोस स्थिरताको भावना नभएसम्म। धीरे-धीरे "विच्छेद" को स्थान लाई बिस्तारै बदल्नुहोस्।
पहाडहरूमा प्राथमिकता दिनुहोस्, जसमा सुरक्षा बाड़हरू छन् (रेलिङ, डबल-चिसो विन्डोहरू, हेजहरू)।
चक्कर बढ्नुको साथ, एक वस्तुमा फोकस गर्नुहोस्, गायब नभएसम्म यो सहकर्मी।
पुरानो स्थानमा फर्किँदै, यो कल्पना गर्न यो समय सबै कुरा सफल हुनेछ, र ए्रोफोबिया आफैले प्रमाणित गर्दैन।
हाइट्सको डरबाट ट्याबलेट
जो लोग एकोफोबिया संग सामना गर्न सक्दैन, उनको समस्या मनोवैज्ञानिकहरु संग व्यवहार गर्छन। गोलहरू प्रयोग गरेर हाइट्सको डर कसरी हटाउन? सुरू गर्न, तपाईंले साबित साधनहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। यो मातृभाषा र वेलरियन हो। डाक्टर को अनुमति संग, ए्रोफोबिया देखि दबाइहरु लाई निर्धारित गरिएको छ:
तिनीहरू दिनको सहिष्णुताको रूपमा वर्गीकृत हुन्छन् - उनीसँग स्पष्ट व्याख्यात्मक प्रभाव छैन, तर प्रतिक्रियाहरू रोक्न सक्दछ। त्यसकारण, तिनीहरूलाई प्रयोग गरेपछि, तपाईं ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्न। आफैलाई एकोफोबियासँग सामना गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वा सजिलो बाटो खोजीमा औषधि जानुहोस् - सबैले आफैं निर्णय गर्छ कि हाइट्स भन्दा डराउनु हुँदैन।
केटा बनाउन के हो?
कम्प्युटर लत - लक्षणहरू, लक्षणहरू र कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ?
महिलाको लागि आत्म-सम्मान कसरी वृद्धि गर्ने?
सामरिक प्रभाव - सम्मिश्रण र synergistic प्रभाव को अवधारणा
मार्जिनहरू को हुन्, मार्जिनिटीको प्रविधि र विपक्ष
मानसिक रूपमा असंतुलित व्यक्ति
शान्त रहन कसरी
Stomatitis - घर मा उपचार
अनुहार ऐक्रेलिक पेंट - प्राविधिक विशिष्टताहरू
Gavin Rossdale Mindy Mann संग मिति मा जान्छ
अनुहारको लागि रात क्रीम - छालाको सबैभन्दा उत्तम हेरचाह, जब तपाईं सुत्नुहुन्छ
जाडोमा प्रेमीहरू किन लगाउने?
हनीस्क्रलबाट जाम - उपयोगी मिठाईको9वटा व्यञ्जनहरू
म्यान मार्केट्रर्न मा प्रेम
मौलिक शैलीमा ड्रेस गर्नुहोस्
पिपा मिडलटन उनको मंगेतर को लागि "पर्वतहरू बदल्न" तयार छ!
उबलिएको मशरूम बाट मशरूम कावीर
जेनिफर एनिस्टनले भने कि ब्राड पिट र एन्जिलिना जोलीले उनीहरूलाई के लायक पाए
फर तेल - औषधीय गुण र स्वास्थ्य को लागि contraindications
सेतो मशरूम कसरी सूप पकाउने?
पातहरु को उल्लू
बेस्सरी पीएसवाईले नयाँ नृत्य हिटलाई रिहायो
ग्रीष्मकालीन पतलून 2015